Myat Thura: March 2007
Posted by Myat Thura - Myanmar man from Burma at 4:52 PM 1 comments
Do you know that you can watchalot of music videos on You Tube? US, western, Korean, Chinese, Asian, as well as many Burmese (Myanmar) MTVs are there. Have you ever tried it before? Just search by the name of the singer, or simply type MTV or MV into the search box. You will be amazed at how many free music videos are there in You Tube.
Here is one of my favourite: Sexy Back by Justin Timberlake
Posted by Myat Thura - Myanmar man from Burma at 6:44 PM0comments
According toaReuters News report, Myanmar hasanew outbreak of bird flu in Yangon. U Than Hla of the Ministry of Livestock Breeding & Fisheries told Reuters that fowl on four farms on the northern outskirts of Yangon were tested positive for the virus. The outbreak on the largest of the farms prompted the culling of all 1,500 chickens and ducks on it, he said.
Reuters News report stated:
"The owner of the farm informed us immediately and we carried out necessary tests. The results of the laboratory tests showed it was H5N1. Arrangements are under way to have the specimen tested at the reference laboratories abroad," Than Hla said.
"It is inaresidential area and we are taking all possible measures to control the situation and to monitor the spread," he said, adding that so far there had been no trace of the virus spreading to humans.
I don't know whether it is true or not but people are avoiding chicken in Yangon. Everybody already know about it and tells everybody to stop eating chicken.
Technorati Tag : Bird Flu, Myanmar, Burma
Posted by Myat Thura - Myanmar man from Burma at 5:35 PM0comments
Posted by Myat Thura - Myanmar man from Burma at 4:01 PM0comments
Posted by Myat Thura - Myanmar man from Burma at 10:51 AM0comments
Chin National Day 2007 was held at U Wumthu Maung Stadium in Hakha, Chin State, on 20th of February, 2007. The origin of Chin National Day or Chin State Day dated back to 1948. On 20 February 1948,apeople's assembly was held in Falam, and decided unanimously to reject feudalism and in support of the Union. Since then, February 20 was marked as Chin Day, and ceremonies were held every year. This year's ceremony was 59th.
Starting from 19 February, show rooms and shops were open in U Wumthu Maung Stadium. Chin traditional wrestling competition was also held. At night, Chin fashion show and Chin traditional dances were held in the stadium.
On 20 February, winners were given awards, and groups from Hakha and Falam performed traditional dances. After that, "Khaung Kauk Pwe" was held. In ancient time, the saw bwa or local lord choseagirl as her minor wife. The wife to be was accompanied to the saw bwa withaceremonary. That ceremony was named "Khaung Kauk Pwe". Nowadays, the descendents of former saw bwas do the ceremonary just as an honour, to show their former glory.
First, the honored maiden was carried onaseat to the ceremony. The lady was allowed to get off near by,acarpet was laid (the lady was not allowed to touch the ground) and the lady stand on the carpet. At the chosen time, guns were fired to mark the start of the ceremony, and the lady was walked to the seat inagrand ceremony. Once seated, the seat was carried by the people who danced with the music. People formedacircle around the lady and danced with the music too. Afterawhile, the ceremony was complete.
Almost all the town, both old and young, came to the National Day ceremony. They wear colorful dresses made by beautiful Chin fabrics. Chin National flags were also proudly flied at every house.
At night,apop band from Kalay performed at the stadium.
Posted by Myat Thura - Myanmar man from Burma at 10:35 AM0comments
ချင်းအမျိုးသားနေ့ (၂) - ခေါင်ကောက်ပွဲ
Posted by Myat Thura - Myanmar man from Burma at 10:29 AM0comments
၂၀၀၇ ချင်းအမျိုးသားနေ့ အခမ်း အနားကို ဟားခါးမြို့ ဦးဝမ္မသူးမောင်း အားကစားကွင်းမှာ စည်ကား သိုက်မြိုက်စွာ ကျင်းပ ခဲ့ပါတယ်။
၁၉၄၈ ဖေဖေါ်ဝါရီ ၂၀ ရက်နေ့ ဖလမ်းမြို့ ချင်းလူထု အစည်း အဝေးက ပဒေသရာဇ် စနစ်ကို ဆန့်ကျင်ကြောင်းနဲ့ ပြည်ထောင်စုကို ထောက်ခံကြောင်း ဆုံးဖြတ်ခဲ့ရာက အစပြုပြီး ချင်းအမျိုးသား နေ့ကို နှစ်စဉ် ကျင်းပလာ ခဲ့ပါတယ်။ အခု ၂၀၀၇ မှာ (၅၉) နှစ် ပြည့်ပါပြီ။
ဖေဖေါ်ဝါရီ (၁၉) က စပြီး ဦးဝမ္မသူးမောင်း အားကစား ကွင်းအတွင်း ဌာနဆိုင်ရာ ပြခန်းတွေ၊ ဈေးဆိုင်တွေ ဖွင့်လှစ် ရောင်းချ ပါတယ်။ ချင်းရိုးရာ နပမ်းပွဲလဲ ကျင်းပပါတယ်။ ညဖက်မှာ ရိုးရာ အကနဲ့ ချင်းရိုးရာ ဝတ်စား
ဆင်ယင်မှု ပြပွဲလဲ ပြုလုပ်ပါတယ်။
၂၀ ရက်နေ့ မနက်မှာတော့ရိုးရာ အကတွေနဲ့ ဖျော်ဖြေပြီး ဆုရရှိ သူများကို ဆုချီးမြင့်ပါတယ်။ ဒီ့နောက် ခေါင်ကောက်ပွဲကို ဆက်လက် ပြုလုပ်ပါတယ်။ ရှေးခေတ်ကတော့ အုပ်ချုပ်သူ စော်ဘွားက တော်ကောက်တဲ့ အမျိုး သမီးပျိုကို အခမ်း အနားနဲ့ သိမ်းပိုက်တဲ့ ပွဲဖြစ်ပါတယ်။ အခုတော့ ယခင် စော်ဘွား အနွယ်ဝင် တစ်ဦးက အခမ်းအနား သဘော ကျင်းပတာ ဖြစ်ပါတယ်
Posted by Myat Thura - Myanmar man from Burma at 10:15 AM 1 comments
Posted by Myat Thura - Myanmar man from Burma at 10:09 AM0comments
ဖလမ်းဟာ ချင်းပြည်နယ် မြောက်ပိုင်း ဖလမ်းခရိုင်ရဲ့ မြို့တော် ဖြစ်ပါတယ်။ ချင်းပြည်နယ်မှာ မြောက်ပိုင်း ဖလမ်းခရိုင်နဲ့ တောင်ပိုင်း မင်းတပ်ခရိုင် ဆိုပြီး ခရိုင်နှစ်ခု ရှိပါတယ်။ ဖလမ်း ခရိုင်မှာ ဖလမ်း၊ တီးတိန်၊
တွန်းဇံ နဲ့ ထန်တလန် မြို့များ ပါဝင်ပါတယ်။
၁၉၆၅ မတိုင်မီ အထိ ဖလမ်းဟာ ချင်းပြည်နယ်ရဲ့ မြို့တော် ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၆၅ မှာတော့ ဟားခါးကို မြို့တော်ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ ကြပါတယ်။ အရင်ကတော့ ဖလမ်းဟာ အလွန် စည်ကားခဲ့ပါတယ်။ အခုတော့ ဟားခါးက ပိုပြီး စည်ကား သွားပါပြီ။
ဖလမ်းမှာ ၂ ထပ်၊ ၃ ထပ် တိုက်တွေ အတော်များများ တွေ့ရပါတယ်။ ထုထည် ကြီးကြီးနဲ့ အခိုင်အခန့် ဆောက်လုပ် ထားတာပါ။ အရင် မြို့တော် ဖြစ်ခဲ့စဉ်က ဆောက်လုပ် ခဲ့တာပါ။ အခုတော့ တော်တော်လေး ဟောင်းနွမ်း နေပါပြီ။ ခန့်ညားမှု ကတော့ ကျန်ပါသေးတယ်။
ဖလမ်းမြို့ဟာ တောင်ဆောင်းမှာ အထပ်ထပ်၊ အဆင့်ဆင့် တည်ဆောက် ထားတာပါ။ အတော်လေး လှပါတယ်။ ဖလမ်း သူတွေဟာ ချင်းပြည်နယ် တစ်ခုလုံးမှာ အလှဆုံးလို့ ကျော်ကြားပါတယ်။ သက်မွန်မြင့်ဟာ ဖလမ်းသူပါ။
မြို့လယ်မှာ ကြီးမား ခန့်ငြားတဲ့ ခရစ်ယာန် ဘုရားရှိခိုး ကျောင်းကြီး ရှိပါတယ်။ ဖလမ်းက အထွက်မှာတော့ တောင်တန်း သာသနာပြု ဆရာတော် ဦးဥတ္တမသာရ သီတင်းသုံး ခဲ့ရာ ကျောင်းသင်္ကန်းကို သွားရောက် ဖူးမြော် နိုင်ပါတယ်။ မြို့လူဦးရေ အများစု ကတော့ ခရစ်ယာန်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။
Posted by Myat Thura - Myanmar man from Burma at 9:56 AM0comments
The road is quite wide and good, with good hard ground. At 8:00 AM we reached Thai Ngin village, 32 miles away from Kalay, where the road to Tiddim started. At 8:40 we reached Var Lone village, 42 miles away from Kalay. We had our lunch at Cherry Restaurant. It was still too early for me to have lunch so I didn't have anything there.
ကလေး - ဖလမ်း - ဟားခါးလမ်း (၂)
ဖလမ်းမြို့ဟာ သန့်ရှင်းပြီး သေသပ် လှပတဲ့ တောင်ပေါ် မြို့လေးတစ်မြို့ ဖြစ်ပါတယ်။ လူနေမှု စနစ်လဲ မြင့်ပါတယ်။ ဖလမ်း မြို့လယ် လမ်းတစ်လျှောက် ၂ ထပ်၊ ၃ ထပ် အဆောက် အဦတွေ ဆောက်လုပ်ထားပြီး ကြီးမား ခန့်ညားတဲ့ ခရစ်ယာန် ဘုရားကျောင်းကြီး ရှိပါတယ်။ မြို့ကို တောင်စောင်းမှာ အဆင့်ဆင့်၊ အထပ်ထပ် တည်ထားတဲ့ အတွက် အလွန် လှပါတယ်။ ဖလမ်း သူတွေဟာ ချင်းပြည်နယ်မှာ အလှဆုံးလို့ ကျော်ကြား ပါတယ်။
ဖလမ်းမှာ ခရီးသည်တွေ အများ အပြား ကားပေါ် တက်လာ ကြတဲ့အတွက် ကားတစ်စီးလုံး ပြည့်ကျပ် သွားပါတယ်။ ကားအမိုး ပေါ်မှာလဲ လူအပြည့် ဖြစ်သွားပါပြီ။ ဖလမ်းက အထွက် (၁၂:၄၅) ရှိပါပြီ။ ဖလမ်း မရောက်မီ လမ်းအတော် ဆိုးပါတယ်။
ဖလမ်း အနီးမှာ အလွန် လှပတဲ့ လှေခါးထစ် တောင်ယာ စိုက်ခင်းတွေ အမြောက် အများ တွေ့ရပါတယ်။ ရွာတွေရဲ့ လူနေမှု အဆင့် အတန်းလဲ မြင့်မားပုံ ရပါတယ်။
ဖလမ်း - ဟားခါး လမ်းပိုင်းမှာ ဖလမ်းဖက် ခြမ်းပဲ လမ်းကောင်းပြီး၊ ဟားခါးဖက် ခြမ်းက လမ်းအတော် ဆိုးပါတယ်။ အချို့ အပိုင်းတွေက ပြုပြင်ဆဲပါ။
ဟားခါးရောက်တော့ ညနေ (၄:၃၀) ရှိပါပြီ။
Posted by Myat Thura - Myanmar man from Burma at 6:21 PM0comments
ကလေး - ဖလမ်း - ဟားခါးလမ်း (၁)
ကလေးကနေ ဖလမ်းကို ဖြတ်ပြီး ဟားခါးကို မှန်လုံကားတွေ နေ့စဉ် (တနင်္ဂနွေ မှအပ) ပြေးဆွဲပါတယ်။ တစ်ပတ် (၆) ရက်ပါ။ ချင်းတောင်တန်း လိုင်းနဲ့ ရွှေခြင်္သေ့ လိုင်းဆိုပြီး နှစ်လိုင်း ရှိပါတယ်။ နေ့စဉ် တစ်စီးစီ ထွက်ပါတယ်။ ဟားခါးကလဲ တစ်စီးစီ ထွက်ပါတယ်။
ကလေးက မနက် (၅) နာရီ ကားတွေ စထွက်ပါတယ်။ ကလေးမြို့တွင်း လူတင် နေတာကြောင့် ကလေးက ထွက်တဲ့ အချိန်မှာ မနက် (၆) နာရီ ရှိပါပြီ။ ကလေးမြို့က စထွက်ထွက်ချင်း ချင်းပြည်နယ်ထဲ ရောက်ပါတယ်။ ၁၀ မိနစ်ခန့် သွားပြီးတော့ တောင်ခါးပန်း တစ်ခုနားက အထိမ်း အမှတ် ကျောက်တိုင်မှာ ကားရပ်ပြီး ခရစ်ယာန် ဘာသာ ထုံးစံအတိုင်း ဆုတောင်း ကြပါတယ်။ ချင်းလိုပါ။ ချင်းပြည်နယ်မှာ မိသားစု ဝင်တွေ၊ အကြီးအကဲတွေ
ခရီးထွက် တဲ့အခါ လမ်းခရီးမှာ ဘေးကင်းစေဖို့ မိသားစု ဝင်တွေ၊ လက်အောက် ငယ်သားတွေက ဒီလိုပဲ ဆုတောင်းပေး ကြပါတယ်။ အင်မတန် ချစ်စရာ ကောင်းတဲ့ ဓလေ့ တစ်ခုပါ။
လမ်းက ကတ္တရာ ခင်းလမ်း ဖြစ်ပြီး ကောင်းပါတယ်။ မြေသားမာပြီး ကျင်း၊ ချိုင့် နဲပါတယ်။ မနက် (၈)နာရီမှာ ၃၂ မိုင်က သိုင်းငင်းရွာကို ရောက်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ တီးတိန် လမ်းခွဲ ရှိပါတယ်။ ကလေးက တီးတိန် သွားမယ့် လူတွေက ညာဖက် လမ်းခွဲ အတိုင်း သွားကြရပါတယ်။
မနက် (၈:၄၀) နာရီမှာ ၄၂ မိုင်က ဗားလုံရွာကို ရောက်ပါတယ်။ ဒီရွာမှာ မနက်စာ စားကြပါတယ်။ ချယ်ရီ စားသောက်ဆိုင် မှာပါ။ မနက်စောသေးလို့ ကျွန်တော်ကတော့ မစားဖြစ်ပါ။ ဗားလုံက ဆက်ထွက်တော့ မနက် (၉) နာရီ ကျော်နေပါပြီ။ အထွက်မှာ လမ်းအတော် ဆိုးပါတယ်။ လမ်းတော့ ပြင်နေ ကြပါတယ်။
မိုင် ၅၀ မှာ ရိဒ် လမ်းခွဲ ရှိပါတယ်။ လမ်းကတော့ မြေလမ်းပါ။ ဝန်တင်လား တွေနဲ့ လားဝန်တင် ကုန်သည် အချို့လဲ တွေ့ခဲ့ ရပါတယ်။
၅၃ မိုင်က ဖလမ်းမြို့နယ်၊ လုံတောကျေးရွာ အုပ်စု တဝိုက်မှာ လှေခါးထစ် တောင်ယာတွေ အများအပြား တွေ့ရပါတယ်။ ဒီကနေ ဟားခါးအထိ လမ်းတလျှောက် လှေခါးထစ် တောင်ယာခင်း အများ အပြား စိုက်ပျိုး ထားတာ တွေ့ရပါတယ်။
၅၉ မို်င်မှာ လုံဗန်း ကျေးရွာ ရှိပါတယ်။ အတော် ကြီးမားတဲ့ ကျေးရွာကြီး ဖြစ်ပြီး အထက်တန်း ကျောင်းနဲ့ တိုက်တယ် ဆေးရုံတို့ ရှိပါတယ်။ လှေခါးထစ် တောင်ယာ များလဲ အများ အပြား တွေ့ရပါတယ်။ ကျေးရွာရဲ့ အခြေ အနေ အရ အတော် စီးပွားရေး ကောင်းမယ်လို့ ယူဆ ရပါတယ်။
လုံဗန်း ကျေးရွာက လွန်ပြီး လမ်းက ပြန်နိမ့် ဆင်းသွားပါတယ်။ မွေလိမ် မွေကောက် ဆင်းသွားပြီး မိုင် ၇၀ မှာ မဏိပူရ မြစ်ကို ဖြတ်ကူးတဲ့ ဘားတံတား ရောက်ပါတယ်။ မနက် (၁၁:၄၅) ရှိပါပြီ။ နောက်ထပ် ၁၀ မိုင်လောက် ဆက်သွားပြီး ဖလမ်းကို (၁၂:၁၅) ခန့်မှာ ရောက်ပါတယ်။
Posted by Myat Thura - Myanmar man from Burma at 6:00 PM0comments
Another one from Chin National Day 2007, Hakha, Chin State, Myanmar.
This is another video of Chin National Day Hakha 2007.
Posted by Myat Thura - Myanmar man from Burma at 5:45 PM0comments
ကလေး - တမူး ကားလမ်း
ကလေး - တမူး ကားတွေ ကလေး မြို့တွင်း ကားလေးဝင်း ကနေ နေ့စဉ် ထွက်ပါတယ်။ Van (Town Ace) နဲ့ မှန်လုံ ကားတွေ ပြေးဆွဲပါတယ်။ ကားကြီးတွေလဲ ပြေးဆွဲပေမယ့် ကုန်အဓိက တင်တဲ့ အတွက် လူစီးလို့ အဆင် မပြေပါဘူး။ Van ကား ၂၅၀၀ ကျပ်၊ မှန်လုံ ၂၀၀၀ ကျပ် ဖြစ်ပါတယ်။ ကလေးက နေ့စဉ် နံနက် ၇ နာရီ နဲ့ နေ့လယ် ၂ နာရီ ထွက်ပြီး၊ တမူးကနေ နံနက် ၉ နာရီနဲ့ နေ့လယ် ၂ နာရီ ထွက်ပါတယ်။
ကလေးက ကားမထွက်မီ မှတ်ပုံတင် တွေကို ကားမောင်းသူထံ အပ်နှံ ရပါတယ်။ ကလေး အထွက် စစ်ဆေးခြင်း မရှိပါ။ ကားလမ်းမှာ အထူးပင် ကောင်းမွန်ပါတယ်။ အိန္ဒိယ အကူအညီနဲ့ ဖေါက်လုပ် ထားတာလို့ သိရပါတယ်။ အချို့ နေရာတွေမှာ ကျင်း၊ ချိုင့် အနည်းငယ် ရှိသည်မှ အပ တော်တော် ကောင်းပါတယ်။
နှစ်လမ်းမောင်း ဖြစ်ပြီး လမ်းညွှန် ဆိုင်ဘုတ်များ ပြည့်စုံစွာ ရှိပါတယ်။
ကလေးက မိုင် (၆၀) ခန့်မှာ ခန်းပတ် မြီု့နယ်ခွဲကို ရောက်ရှိပါတယ်။ ခန်းပတ်မှာ ကားတွေ ခဏ ရပ်နားပြီး convoy ဖွဲ့၍ ရဲ၊ တပ် အစောင့် အရှောက်နဲ့ သွားရပါတယ်။ ခန်ပတ်မှ တမူး အထိ မိုင် (၃၀) ခန့်မှာ အိန္ဒိယ နယ်စပ်မျဉ်း တလျှောက် ဖောက်လုပ် ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ တဖက်နိုင်ငံမှာ မဏိပူရ ခွဲထွက်ရေး သူပုန်တွေ လှုပ်ရှား နေတဲ့ အတွက် အစောင့် လိုက်ရတာပါ။ မြန်မာနိုင်ငံ ဖက်ခြမ်းမှာတော့ အေးချမ်းပါတယ်။
ကလေး - တမူး လမ်းပေါ်က ရွာတွေ ကြီးမားပြီး အိမ်ကြီး၊ အိမ်ကောင်း တွေလဲ ပေါပါတယ်။ စီးပွားရေး ကောင်းဟန် ရှိပါတယ်။ ချင်းအမျိုးသားတွေ အများအပြား နေထိုင်ကြပြီး ခရစ်ယာန် ဘုရားကျောင်းတွေ ရွာတိုင်းလိုလို ရှိပါတယ်။ လယ်ယာ မြေကောင်းတွေ ပေါများပါတယ်။
တမူးမြို့ အဝင်မှာ ကားဝင်း ရှိပါတယ်။ လမ်းမကြီး ဘေးမှာပါ။ ခရီးသည်တင် ကားနဲ့ ကုန်ကားတွေ ကိုပဲ စစ်ဆေးပြီး ဆိုင်ကယ်၊ စက်ဘီးတွေ ကတော့ လွတ်လပ်စွာ သွားလာနေ ကြပါတယ်။ ကားဝင်းက မထွက်မီ ခရီးသည် တွေရဲ့ ခရီးဆောင် အိတ်တွေကို စစ်ဆေးပါတယ်။ ပြီးတော့ မှတ်ပုံတင် တွေကို လဝက ကပြန်ပေးပါတယ်။
ကားဝင်း အပြင်ဖက်မှာ ဆိုက်ကားငှားပြီး တမူး မြို့တွင်းကို သွားနိုင်ပါတယ်။ လူနေ အိမ်ခြေ တွေက ကားဝင်းကို ကျော်ပြီး ရှိနေပါတယ်။ ကလေး - တမူး လမ်းဟာ အဆင်ပြေပြေ၊ သက်တောင့် သက်သာ သွားနိုင်တဲ့ ခရီးပါ။
Posted by Myat Thura - Myanmar man from Burma at 5:14 PM0comments
About 10 minutes away from Tamu by bus is Morai,atown from India, and Nan Pha Long Market and village, in Myanmar. It cost only 200 kyats per person forabus ride. There are many Indians from Morai coming to shop at Nan Pha Long Market. Marchandises on sale include those from China, Thailand, as well as foods and produsts from Myanmar. People from Tamu also come and buy Indian products too.
There is no fence between Morai and Myanmar side although there isaborder check point. People could pass the border freely without restriction, and people from India could visit as far as Tamu.
Burmese citizens are not allowed to visit Morai but, because there is no fence, people from Tamu and Nan Pha Long simply go to Morai without any restriction. However, I was advised not to wander around in Morai as there are insurgents in Manipur. Occasional gun fights do happen in Morai. On Myanmar side, there is only peace. Inhabitants of Tamu usually refrain from talking about the Maniput insurgents as they are afraid of the insurgents.